ပရိုဖိုင်းလိပ်၏လိပ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် groove အကြားသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်အစိတ်အပိုင်း။ လိပ်ပေါ်တွင်လိပ်ကွင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားအရသိရသည်ကအဆုံးလိပ်လက်စွပ်နှင့်အလယ်တန်းလိပ်လက်စွပ်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
ရှေ့လှိမ့်မှု၏ရှေ့ခံထည်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအချင်းareaရိယာသည် ၅၀mm2 အထိရှိပြီးကြိုတင်အလှည့်အတုံး၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအချင်းareaရိယာသည် ၁၀၀mm2 အထိရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလှိမ့်နေသောပုံပျက်သောပမာဏသည်ရာပေါင်းများစွာသောနယူတန်များကိုတွန်းအားပေးရန်လိုအပ်သည်။ နွေ ဦး သံမဏိ၊ ဘောလုံးသံမဏိနှင့်အခြားအထူးသံမဏိများအတွက်၎င်း၏ဒြပ်ထုသည်ပိုမိုကြီးမားသည်။
ဥပမာ - ပြင်ပအချင်းမော်ဒယ် ၁၇၀ ကိုရိုက်ထားသောနောက်ဆုံးဘောင် V = 100m / s၊ သက်ရောက်မှုကြိမ်နှုန်း F = ၁၁၂၄၀ ကြိမ် / တစ်မိနစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ V = 80m / s ဖြစ်ပါက roll ring ၏အချင်းသည် ၁၇၃ ဖြစ်သည်၊f= 8836 ကြိမ် / မိနစ်ဖြစ်သည်။
လှိမ့်နေသောအအေးခံသောရေသည်အက်စစ်နှင့်အယ်ကာလိုင်းအချို့ရှိသောကြောင့် roll ring ၏လျှပ်စစ်ဓာတုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သော galvanic cell တုံ့ပြန်မှုသည်ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရလဒ် roller လက်စွပ် corroded ။ မြင့်မားသောအပူချိန်နောက်ထပ်ဒီတုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
လက်စွပ်ကိုလှိမ့်။ ပူသောကြိုးဝါယာကြိုးထဲသို့ကိုက်လိုက်ပြီးနောက်၎င်းမှလွှဲပြောင်းပေးသောအပူကိုရရှိသည်။ ထို့နောက်ချောင်းများနှင့်ဝါယာကြိုးများကိုအအေးခံလိုက်သည်။ လက်စွပ်၏မျက်နှာပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းအလွှာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အကြားအပူချိန်ကွာခြားမှုသည်အပူလွှဲပြောင်းမှု gradient ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်၏ဤခြားနားချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ linear တိုးချဲ့သို့မဟုတ်ကျုံ့အတွက်ခြားနားချက်အပူစိတ်ဖိစီးမှု။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် roll ring ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမည်သည့်အချက်ကိုမဆိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းများတွင်အပူ ပေး၍ အအေးပေးသောကြောင့်အပူဖိစီးမှုသည် roll roll ring ကိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ roller ring ပေါ်တွင် term shock ပြောင်းခြင်း၏ရလဒ်မှာပုံမှန်လိပ်အက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည့်အပူပင်ပန်းစေသောအက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။
5. မြန်နှုန်းမြင့် wear နှင့်ပွန်းပဲ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
roller ring သည်မြန်နှုန်းမြင့်လှံတံနှင့်ဝါယာကြိုးများကိုလှိမ့်။ လှိမ့်နေစဉ်လှိမ့်ကျောကြိုးသည်မြန်နှုန်းမြင့်သောပွတ်တိုက်မှုနှင့် ၀ တ်ဆင်မှုကိုခံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အအေးခံရေထဲရှိအစိုင်အခဲအမှုန်များနှင့်သံအောက်ဆိုဒ်အကြေးခွံများသည်တိုက်စားမှုနှင့်ပွန်းပဲ့မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂။ မပျက်စီးစေသောစစ်ဆေးမှုများမှတဆင့်လိပ်လက်စွပ်၏အတွင်းပိုင်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေပါ။ တံဆိပ်တုံး၏အမှတ်အသားသည်သင်၏ကုမ္ပဏီစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီးပြောင်းလဲနေသောဟန်ချက်ကိုထိခိုက်စေသောအချက်များကိုရှောင်သည်။
3, အလိပ်လက်စွပ်၏ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်, အဘယ်သူမျှမတွင်း, သဲတွင်း, ဒါကိုတော့, ပါဝင်နိုင်နှင့်အခြားပြည်တွင်းရေးအရည်အသွေးကိုချို့ယွင်းချက်, အလိပ်လက်စွပ်၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက်အသားပေါ်လာပါဘူး, လိပ်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။
4. ထိရောက်သောအလုပ်လုပ်လိပ်အချင်းအတွက်ထောက်ပံ့လိပ်လက်စွပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသေချာပါစေ။ လိပ်လက်စွပ်၏အရည်အသွေးအာမခံချက်ကာလသည်လက်စွပ်၏ထိရောက်သောအလိပ်လိပ်အချင်းဖြစ်သည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ roller rings ကို online တွင်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုပိုမိုတိုးတက်စေရန်အရည်အသွေးဆိုင်ရာခြေရာခံခြင်းကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ site ပေါ်တွင် roller rings ၏အရည်အသွေးပြproblemsနာများရှိပါက ၁၂ နာရီအတွင်းတိကျ။ တာဝန်ရှိသည့်ပြန်ကြားချက်ပေးပါမည်။
ရှေ့သို့ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းလုပ်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်အဖြိုက်နက်ကာဗိုက် roller - ကာဘိုက်ချည်လိပ်ကွင်း - Dongxing
နောက်တစ်ခု: Carbide ချည်လိပ်လက်စွပ်
Tungsten Carbide ကြိတ်စက်, Tungsten Carbide လိပ်, Tungsten Carbide ကြိတ်စက်, စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်း, Carbide လိပ်, စက်လိပ်လက်စွပ်,